UXiaomi uyiphinda kabini intengiso yakhe kwikota yokuqala ye-2018 | I-Androidsis
Inkqubela phambili kaXiaomi kwintengiso ayinakuthinteleka. Oko kubonakala kucacile. Uphawu lwaseTshayina belufumana ubukho kwimarike yamanye amazwe, kwaye siyabona ukuba lwenza njani inkqubela phambili kwiimarike ezinje ngeSpain. Kwinqanaba lehlabathi izinto zihamba kakuhle kakhulu ngophawu. Ukusukela kwikota yokuqala yonyaka, ukuthengisa kwayo kuphindwe kabini xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo.
Ngale ndlela, ngezi ntengiso, UXiaomi sele engumvelisi wesine othengisa kakhulu kwihlabathi liphela. Isampulu enye yomzuzu olungileyo ukuba uphawu lwaseTshayina luhlale. Kwaye njengoko isondela kwabanye abavelisi abanjengoHuawei okanye iSamsung.
Kwikota yokuqala yonyaka ophelileyo uphawu lwathengisa phantse iifowuni ezizizigidi ezili-13 kwihlabathi liphela. Inani elilungileyo, kwaye apho amanani abo aphuculweyo xa kuthelekiswa no-2016. Nangona ibikulo nyaka xa bekukho ukutsiba okukhulu malunga nentengiso yenkampani.
Kwikota yokuqala ye-2018 uXiaomi uthengise iifowuni ezizigidi ezingama-28. Inani elingaphezulu kokuphindwe kabini iziphumo ezifunyenwe kwikota yokuqala yonyaka ophelileyo. Inkqubela phambili enkulu yohlobo lwaseTshayina. Ngale ndlela, sele iligama lesine elithengisa kakhulu kwihlabathi liphela.
Zisemva kwesiqhelo i-Samsung, iApple kunye neHuawei. Ngale ndlela, iinkokheli ezintathu zentengiso azitshintshanga kangako, ngokunyuka okuphawulekayo nguHuawei kwintengiso. Nangona uphawu olulahlekelwe ngumhlaba ngenxa yokukhula kweXiaomi yi-OPPO. Ukuthengisa kwakho kuphantsi ngandlela thile.
Ke inokuba lixhoba eliphambili lenkqubela phambili enkulu kaXiaomi kwintengiso. Kancinci kancinci bayasondela kwabona bathengisi babalaseleyo, nangona basesemgama obonakalayo. Kodwa Kuya kuba yimfuneko ukubona ukuba ukuthengisa kwabo kuguquka njani kuyo yonke le 2018.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » UXiaomi uyiphindaphinde intengiso yakhe kwilizwe jikelele kwikota yokuqala
Ukungabikho kwebhokisi kunye nokuqala kokubonakala kweHuawei P20 Pro